Misako သည်၎င်း၏ Fall 2019 လှုပ်ရှားမှုကိုအသစ်တင်ဆက်ခဲ့သည် Bezzia
Misako က၎င်း၏ Fall 2019 လှုပ်ရှားမှုကိုအသစ်တင်ဆက်သည်
မာရီယာ vazquez | | လက်ကိုင်အိတ်များ
Misako ကကျမတို့အားလုံးကိုအဖြစ်မှန်ဆီသို့ပြန်လှည့်စေသောကျဆုံးသော 2019 မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးကိုပြင်ဆင်ခဲ့သည်။ ရုံးထဲကိုပြန် ဒါကသူကအဲဒါကိုအမည်ပေးခဲ့တယ်၊ ငါတို့ဗီရိုကိုလှည့်စားဖို့ဖိတ်ခေါ်တယ်၊ ပြီးတော့အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးကိုပေးတယ်။ သူတို့ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်လိုပါသလား?
ရုံးကနေသူငယ်ချင်းများနှင့်အတူတစ်လုပ်ပြီးနောက်သို့မဟုတ်နေ့လည်ခင်းခရီးထွက်။ ၏ဖြည့်စွက် Misako စုဆောင်းမှုအသစ် သူတို့သည်သင့်အားတစ်ရက်လျှင် ၂၄ နာရီသင်နှင့်အတူလိုက်ပါလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်၎င်း၏အခြေခံများ၏ဘက်စုံသုံးမှု၊ နိုင်လွန်အိတ်များနှင့်ကျောပိုးအိတ်များ၏ပေါ့ပါးခြင်းသို့မဟုတ် Fanny အထုပ်များနှင့်ခေတ်မှီဒီဇိုင်းများ၏ပင်ကိုစရိုက်ကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။
3 Fanny အထုပ်
Adison အိတ်များ leatherette ၏ဖန်ဆင်းတော်မူ၏ သူတို့က, မဆိုင်းမတွရာသီ၏အကြိုက်ဆုံးဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ ပခုံးအိတ်သည်သင်လိုအပ်သည့်အရာအားလုံးကိုကြီးမားသောအိတ်သယ်ဆောင်စရာမလိုဘဲသယ်ဆောင်ရန်ပြီးပြည့်စုံသောအရွယ်အစားရှိသည်။ အိတ်ကြီးတစ်လုံးသည်သင်လိုချင်သောအရာဖြစ်ပါကသင်သည်တူညီသောလိုင်းရှိစျေး ၀ ယ်သူထံချဉ်းကပ်နိုင်သည်။ နှစ် ဦး စလုံးပတ်ပတ်လည်သတ္တုလုံးလေးများဖြင့်အလှဆင်ထားသည်။
စကားပြောဖို့အများကြီးပေးမယ့်နောက်အခြေခံတစ်ခုကတော့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတွေအများကြီးရှိတဲ့အလယ်အလတ်အရွယ်အိတ်ပါကာအသစ်ပါ။ ၄ င်း၏စတုရန်းဒီဇိုင်းကိုအသွင်အပြင်နှင့်ဝတ်ဆင်ထားသည့်ပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည် လုံးနှင့်အတူအလှဆင် ၀ တ်ဆင်ထားသောရွှေသည်ယခုရာသီတွင်သင်၏အသွင်အပြင်ကိုစရိုက်နှင့်ခွန်အားများစွာပေးလိမ့်မည်။
စုဆောင်းမှုအသစ်မှနိုင်လွန်အိတ်များသည်လမ်းဘေးအိတ်များဖြစ်သည်။ Misako မှ Bayena ဈေးဝယ်သူအိတ်သည်၎င်း၏စတုရန်းနှင့်ကြီးမားသောပုံစံနှင့်၎င်း၏ထူးခြားချက်ကိုထင်ရှားစေသည် ခြားနားတိ။ Tili ကျောပိုးအိတ်များ (အဖုံးပေါ်တွင်) ကိုသတိမပြုမိဘဲအခန်းများစွာနှင့်ခြားနားသည့်အသေးစိတ်များပါရှိသည်။
အသစ်သောစုဆောင်းမှု၏လမ်းကြောင်းသစ်အိတ်များထဲတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် Fanny အထုပ်များကိုမီးမောင်းထိုးပြချင်သည်။ အထူးသဖြင့် Ejai အသစ်၊ သိုလှောင်မှုပမာဏကြီးမားသည် အများအပြားအခန်းများတွင်ဖြန့်ဝေ။ သင်၏ပုံသဏ္personalityာန်ကိုစရိုက်နှင့်ခွန်အားပေးလိမ့်မည်။ ၎င်းကိုညှိနိုင်သောသိုင်းကြိုးဖြင့်သင့်ကိုယ်ထည်ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်သက်သောင့်သက်သာဝတ်ဆင်နိုင်သည်။
Misako ရဲ့အဆိုပြုချက်အသစ်ကိုသဘောကျပါသလား သူတို့ကစွယ်စုံနှင့်စျေးသိပ်မကြီးတဲ့ဆက်စပ်ပစ္စည်းများမှာ!
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Bezzia » ပုံ » လက်ကိုင်အိတ်များ » Misako က၎င်း၏ Fall 2019 လှုပ်ရှားမှုကိုအသစ်တင်ဆက်သည်
သင်၏အလှအပအတွက် Calendula အကျိုးကျေးဇူးများ
သင့်အိမ်အတွက် Ikea blinds